Sawiro: Imaaraadka iyo Eritrea oo ka wada hadley Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya - Awdinle Online
Home News Sawiro: Imaaraadka iyo Eritrea oo ka wada hadley Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya
Sawiro: Imaaraadka iyo Eritrea oo ka wada hadley Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya
December 24, 2019 (AO) – Madaxweynaha Eritrea Asaias Afwerki ayaa maanta booqasho aan horey loo qorsheyn ku tegey dalka isutaga imaaraadka carab.
Booqashadanayaa ka dhalatey ka dib markii uu sheley Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu safar gaaban u tegey Asmara.
In kastoo hogaamiyeyaasha dalalka itoobiya soomaaliya iyo eritria ay waayahan dambe xulufo ahaayeen, hadana waxaa jira siyaasado iska soo horjeeda oo marna isqaadan karin, sida xiriirka soomaaliya iyo qatar, ama xiriirka eritria iyo masan, amaba xiriirka itoobiya iyo imaaraad oo ay bar bar socdaan xiriirada sacuudiga, suudaan, kenya turkeyga chine iyo wadamada reer galbeedka.
Warar aan heleyno ayaa sheegey in sheekh Maxamed Bin Zaid Al Nahyan iyo Asaias Afwerki ay ka wada hadleen arimaha Soomaaliya, in kastoo si faah faahsan aan loo sheegin qodobada la isla soo qaadey.
Xiriirka Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraad ayaa sii xumaanayey labadii sano ee la soo dhaafey, xitaa waxaa jira in Safiirkii Soomaaliya ay u Magacaawdey Abu Dhabi bilowgii bishii September ee sanadkan 2018 aan weli la aqbalin.
Eritrea ayaa horaantii bishii aan soo dhaafney ee November ee isla sanadkan 2018 eedeyn balaan u jeedisey dowladda qatar, iyadoo ku eedeysey in ay abaabuleyso jabhado iyo afgembi ka dhan ah dowlada eritria.
Previous articleXiisad Dagaal oo aad u xun ayaa ka taagan Degmadda Baardheere
Next articleSomaliland oo shuruud ku xirtay wada hadalada Soomaaliya DFS